Soo iibso Choline Bitartrate budada (87-67-2) Soosaarayaasha & Warshadaha
Choline Bitartrate waa nafaqo muhiim ah, oo guud ahaan loogu uruuriyo Fiitamiin B. Marka la qaato qiyaas ugu yaraan 82.5mg waxay leedahay faa iidooyin badan, oo ay kujirto gacan ka gaysashada dayactirka shaqada beerka caadiga ah iyo ku biirinta dheefshiidka caadiga ah ee nafaqada. Choline waxaa soo saaray jirka dabiiciga ah waxaana laga heli karaa cuntada. Cunnooyinka ay kujiraan choline waxaa ka mid ah beedka ukunta, hilibka, isbinaajka, caleenta, kaabajka, salaar, lowska, badarka, galley iyo digir. Bitartrate waxaa lagu kiciyaa choline si loo hubiyo in maqnaanshaha ugu fiican ee jirka bini aadamka.
Choline Bitartrate budada (87-67-2) fiidiyaha
Macluumaadka Saldhigga budada ee Choline Bitartrate
magaca Budada Choline Bitartrate budada
Magaca kiimikada Choline Bitartrate
Isku mid ahaanshaha Bitline;
Formula kelli C9H19NO7
Miisaanka kelli 253.249
Dhibicda Biyaha 151-153 ° C
Muhiimadda InChI QWJSAWXRUVVRLH-UHFFFAOYSA-M
Imaanshaha Budada Cad ee Adag
milmi Dhibaato aalkolo iyo waxoogaa biyo ku milmaya.
kaydinta Xaaladda Heerkulka qolka
Codsiga Dawada, kabitaanka cuntada, nafaqada.
Choline Bitartrate budada Tilmaanta Guud
Choline, quadernary ammonium compound, waxay la mid tahay fiitamiinnada B. Waxaa lagu sameyn karaa beerka waxaana laga heli karaa cunnooyinka sida beerka, hilibka muruqyada, kalluunka, lowska, digirta, digir, isbinaajka, jeermiga qamadiga, iyo ukunta. Choline ayaa looga baahan yahay inay sameyso xuub muhiim ah phospholipids. Waa il muhiim ah oo ka mid ah kooxaha methyl labile iyo horudhac u ah biosynthesis ee neurotransmitter acetylcholine kaas oo lagu sii daayo unugyada neerfaha si loogu diro calaamadaha unugyada kale. Choline waa nafaqo muhiim u ah aadanaha marka methionine iyo folate xad-dhaaf ah aan laga helin cuntada. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cudurada beerka, oo ay ku jiraan cagaarshowga joogtada ah iyo cirrhosis. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daaweeyo murugada, xusuusta oo lunta, waallida nooca Alzheimer, cudurka 'Huntington's chorea', cudurka Tourette, cillad maskaxeed oo loo yaqaan 'cerebellar ataxia', noocyo suuxdin ah, iyo xaalad maskaxeed oo loo yaqaan 'schizophrenia'. Ciyaartooydu waxay u isticmaalaan choline dhisidda jirka iyo dib u dhigista daalka cayaaraha adkeysiga. Choline waxaa qaata haweenka uurka leh si looga hortago cilladaha ku dhaca dhuunta neerfaha ee dhallaankooda waxaana loo isticmaalaa kaab ahaan caanaha carruurta. Isticmaalka kale waxaa ka mid ah ka hortagga kansarka, yareynta kolestaroolka, iyo xakameynta neefta. Choline badanaa waxay kuxirantahay tartaric acid (sidoo kale loo yaqaan bitrate) qaabab badan oo fiitamiin maskaxda ah si loo hagaajiyo heerka nuugista ee nidaamka dareemayaasha jirka iyo ugu dambeyn maskaxda. Isku xidhka labadan fiitamiin ee maskaxda ayaa si wada jir ah u caawiya in la sameeyo isku-dhafyo muhiim u ah caafimaadka ugu wanaagsan ee xuubka iyo dareemayaasha dareemayaasha ee laga helo unugyada jirka.
Choline Bitartrate budada Mechanism Of Action
Dhowr farsamooyin ayaa loo soo jeedinayaa saameynta koritaanka kansarka ee cunno-ka-fogaanta. Kuwani fidinta unugyada unugyada unugyada ah ee laxiriira cusboonaysiinta kadib dhimashada unugyada parenchymal waxay kudhaceysaa beerka 'choline' oo yaraada, hoos udhaca hiddo-wadayaasha, falcelinta unugyada oksijiinta ee ka soo baxa mitochondria oo ay kujiraan peroxidation lipid lipid beerka, firfircoonida borotiinka kinase C tilmaanta ay sabab u tahay isu-uruurinta unugyada diacylglycerol ee beerka, is-beddelidda hidda-wadayaasha taranka ee loo yaqaan 'histidine triad (FHIT)', kaasoo ah hiddo-wadaha xakamaynaya, iyo cilladaha unugyada is-dilitaanka (apoptosis). Laydhka phposphatidylethanolamine N-methyl-transferase (PEMT) ayaa waliba laga yaabaa inay gacan ka geysato isbeddelka xun ee hepatocytes.
Acetylcholine waa mid ka mid ah neurotransmitters -ka ugu muhiimsan ee ay isticmaalaan neuronsin the xusuusta xarumaha maskaxda (hippocampus iyo septum). Choline waxay dedejisaa isku -darka iyo sii -deynta acetylcholine ee unugyada dareemayaasha.
Yaraanta Choline ee dhaqanka unug waxay sababtaa apoptosis ama geeri barnaamijka lagu sameeyo. Tani waxay u muuqataa inay u sabab tahay cilladaha unugyada xuubka ee fosfilidylcholine-ka unugyada iyo xaddiga ceramide, horudhaca, iyo sidoo kale dheef-shiid kiimikaadka sphingomyelin. Ururinta Ceramide, oo ay sababaan yaraanta choline, waxay u muuqataa inay dhaqdhaqaaqayso aaladda loo yaqaan 'Caspase', nooc ah enzyme oo dhexdhexaadinaysa apoptosis.
Choline Bitartrate budada (87-67-2) Codsiga
Waxyaabaha loo yaqaan 'Choline bitartrate' waxaa loo isticmaalay inay ka mid noqoto waxyaabaha ka kooban cunnooyinka tijaabada ah si loo darso saamaynta howlaha taranka iyo tan hiddo-wadayaasha lafaha iyo xilliga naas-nuujinta.
Choline Bitartrate budada cilmi baaris dheeraad ah
Faa'iidooyinka Caafimaadka ee Choline Bitartrate:
Ahaanshaha wax soo saar fitamiin, waxaa lagu dabaqi karaa daawada, daryeelka caafimaadka iyo cuntada.
Waa walxo nafaqo leh iyo ka saare dufan, waxay wanaajisaa dheef-shiid kiimikaadka waxayna ka takhalustaa uruurinta baruurta beerka.
Saameynta foosha muruqa, dhaqdhaqaaqa, isku dubaridka iyo kor u qaad xusuusta.
Ku lug leh hawlaha sare ee maskaxda sida xusuusta, fikir iyo caqli.
Waxay muhiim u tahay hufnaanta qaabdhismeedka ee darbiyada unugyada, soo saarida amino acids iyo borotiinnada iyo dheef-shiid kiimikaadyada dufanka.
Gargaarka daaweynta Alzheimer's Cudur, murugada manic iyo hagaajinta calaamadaha Parkinson's Cudur.
Budada Choline Bitartrate budada (87-67-2) Tixraac
Hartung, C., et al .: Toxicol. Appl. Pharmacol., 12, 486 (1968), Sitaram, N., et al .: Life Sci., Et al.: 22, 1555 (1978)
H. Zeisel, KA Da Costa, PD Franklin, EA Alexander, JT Lamont, NF Sheard, A. Beiser (1991) Choline, nafaqo muhiim u ah aadanaha, 5, 2093-2098